လူ့ဦးနှောက်၏ဦးနှောက်အခြေခံခရီးစဉ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
သာဆိုပါကငါတို့ကို tick စေသည်ဘာကိုတခုတခုအပေါ်မှာညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့! ကောင်းမွန်သောသတင်းကသင်ယူဖို့သိပ်နောက်ကျဘယ်တော့မှမဖြစ်သည်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စရဲ့, ဒါပေမယ့်ကားတစ်စီးလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာလုံခြုံစွာကမောင်းထုတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုသိရန်မလိုပါ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအတိတ်၏ညစ်ညမ်းတူသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပိုပြီးပျော်ပါးလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကိုသာသက်ရောက်သည်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအတိုဗီဒီယိုများဘယ်လိုရှင်းပြပါ။ သူတို့ကဦးနှောက်, အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုလှမျးမိုးပြံ့နှံ့သောဤ Hyper-လှုံ့ဆော်ဖို့ဖျော်ဖြေရေးများ၏မြှူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်ပြဿနာများထဲကဒုစရိုက်ဖြေယူပါ။
"ဟုခေါ်ဒါက4မိနစ်ကို TED ဟောပြောပွဲယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို"စတန်းဖို့ဒ်အားဖြင့်ပါမောက္ခဖိလိပ္ပု Zimbardo arousal စွဲကြည့်ပါတယ်။
"မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု"သိပ္ပံပညာရှင်ဟောင်း Gary Wilson က ၁၆ မိနစ် TEDx ဟောပြောချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူက Zimbardo ချမှတ်ထားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုဖြေကြားပေးတယ်။ ၎င်းကို YouTube ပေါ်တွင်အကြိမ်ပေါင်း ၁၁.၇ သန်းကျော်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဘာသာစကား ၁၈ ခုသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
ဂယ်ရီသည် TEDx ဟောပြောချက်ကို“ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်” ကြာမြင့်စွာတင်ပြပြီးအင်တာနက်က Porn သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထင်သလောက်ဘယ်လို Porn- ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်“ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်စာအုပ်ကိုနှစ်သက်သူများအတွက် Gary's ကိုကြည့်ပါ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ paperback, audio ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Kindle တွင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ဝေမှုတွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၏အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများ (ICD-11) ၏ကဏ္ includes တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါအသစ်တစ်ခုကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမည်သို့ကွာခြားစေသနည်း၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ "ဟုခေါ်တွင်ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါအမေရိကန်စိတ် Hacking: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်၏ကော်ပိုရိတ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံneuroendocrinologist ဒေါက်တာရောဘတ် Lustig အားဖြင့် "အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာရန်။ (၃၂ မိနစ် ၄၂ စက္ကန့်)
ဤ 'ဦး နှောက်အခြေခံများ' ကဏ္တွင် Reward Foundation သည်သင့်အားလူ့ ဦး နှောက်ခရီးစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဦး နှောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ် ရှင်သန်နှင့်ရှင်သန်။ ၁.၃ ကီလိုဂရမ် (၃ ပေါင်နီးပါး) လေးသောလူ့ ဦး နှောက်သည်ကိုယ်အလေးချိန်၏ ၂% မျှသာရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏စွမ်းအင်၏ ၂၀% ကိုအသုံးပြုသည်။
ဦးနှောက်ကိုယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌ function ကိုမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဘယ်လောက်ဆုပ်ကိုင်ဖို့, ကြည့်ရှု ဦးနှောက်ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်၎င်းအပိုင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်အတူတကွမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရမည် neuroplasticity, ထိုကျနော်တို့အနေနဲ့စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲအပါအဝင်အလေ့အထများကိုသင်ယူနှင့်နားမလည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းဦးနှောက်က၎င်း၏အဓိကမှတဆင့်ဆွဲဆောင်မှု, မေတ္တာနှင့်လိင်ဆက်သွယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည် neurochemicals။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆုများဆီသို့အဘယ်ကြောင့်မောင်းနှင်ရကြောင်းနားလည်ရန်အတွက်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရေးကြီးသည် ဆုလာဘ်စနစ်က။ အဘယ်ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ရွှေအသက်အရွယ်ဒါလှိုင်းလေထန်ပျော်စရာများနှင့်ရှုပ်ထွေးပါသလဲ ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုထွက်ရှာမည် ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်.